केपी ओलीको ट्वीटले एमाले–माओवादी नेताहरु झस्किए ! – Everest Dainik – News from Nepal
केपी ओलीको ट्वीटले एमाले–माओवादी नेताहरु झस्किए !
काठमाडौं, बैशाख २५ । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्वीटर ह्याण्डलबाट गरिएको एक ट्वीटले एमाले र माओवादीका नेताहरु चिन्तित भएका छन् । पार्टी एकता प्रक्रियामा धेरै कुरा मिलेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला ओलीको ट्वीटले नेताहरु चिन्तित बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार दिउँसो १.२२ मा एक ट्वीटमा आफ्नो दुनो सोझ्याउन सत्ता समीकरण फेरबदलमा रुचि राख्नेहरुले समृद्धि र विकास नचाहेको ट्वीट गरेका थिए । यो ट्वीट कोप्रति लक्षित हो ? प्रष्ट त छैन । तर, एमाले र माओवादीका नेताहरुले ट्वीट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
एमालेका एक पोलिट्ब्यूरो सदस्यले उज्यालोसँग भने, ‘अध्यक्षज्यूको ट्वीट कोप्रति लक्षित हो भन्ने त स्पष्ट छैन । तर, एकताका लागि धेरै कुरा मिल्दै गएको बेला यस्तो ट्वीट गर्नु राम्रो थिएन । यसले बन्दै गएको विश्वासको वातावरण बिग्रन सक्छ ।’
माओवादीका नेताहरुले ओलीको ट्वीट दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको भए पनि त्यसले एकतामा बल नपुग्ने बताएका छन् । ‘स्वार्थका लागि सत्ता समीकरण फेरबदल भन्ने कुरा कोप्रति लक्षित गर्न खोजिएको हो ?’ एक नेताले भने, ‘माओवादीप्रति लक्षित गर्न खोजिएको हो भने त्यो आपत्तिजनक छ । इतिहासमा सत्ताका लागि जे–सुकै गर्न तयार हुने उहाँहरु नै हो, हामी होइन ।’
उनले राजाको प्रतिगमनको स्वागत गरेर सत्तामा जाने नेताहरुले त्यस्तो टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘राजाको सत्तादेखि सबै सत्तामा प्रायः उहाँहरु नै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो विगत हेर्नुपर्यो । हामी एकताको नयाँ विन्दुमा आएका छौं, विगतप्रति हिलो छ्याप्ने बेला यो होइन ।’
२०७३ वैशाखमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी गरेर एमाले अध्यक्ष ओली पछि हटेपछि माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतमले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोड्नु एमालेका निम्ति घातक भएको बताएका थिए । – ujyaalonepalबाट
चर्चित कृष्णभीर आक्रमणका नायक जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर बने नेपाली सेनाको जर्नेल
तिहार लगत्तै सरकारबाट बाहिरिने बाबुरामको चेतावनी, संविधान संशोधन मुख्य शर्त
यदि तपाईलाई ७ दिनमै स्लिम बन्न मन छ भने यसो गर्नुहोस
संविधान नआएसम्म दारी, कपाल नकाटने प्रतिज्ञा गरेका थिए यिनले